रुपा र कृष्ण यति धेरै खु:शी छोरासँग खेल्दै गरे यस्तो भिडियो पोस्ट, एकैछिनमा लाखौंले हेरे (भि,डियो सहित) – Ap Nepal
रुपा र कृष्ण यति धेरै खु:शी छोरासँग खेल्दै गरे यस्तो भिडियो पोस्ट, एकैछिनमा लाखौंले हेरे (भि,डियो सहित)
सामाजिक संजा’लमा निकै नै लोकपि्र’य जोडी हुन रुपा र कृष्ण । उनीहरूको जोडीले लोकपि्रयता भने त्यति सजिलो’सँग पाएको भने हैन । उनीहरू’को संघर्षको कथा वास्तवमा जो को’हीको लागि पनि एउटा प्रेरणादायी कथा बन्न सक्छ ।
उनीहरूको जोडी मुनामदन को जो’डी जस्तै छ । वास्त’वमा भन्ने हो भने रुपा र कृष्ण क’लियुगका लागि राधा र कृष्णका जोडी हुन भन्दा पनि फरक पर्दैन ।
उनीहरु अहिले आफ्नो जिवनलाई निकै उत्साहपुर्ण तरिकाले बिताइरहेका छन् । दुर्”घटनामा परि हात र खु’”ट्टा गु”’माएका कृष्णलाई रुपाको त्यो साथ, सहयोग, माया अनि स्नेहले जि’उने आधार बनायो।
एक अर्कालाई निकै माया गर्ने यो जोडी’लाई यति ठूलो दु’र्घट’नाले पनि कुनै हाल’तमा छुटा’उन सकेन । हात खु’ट्टा गु’माएका कृष्णलाई रुपाले माया, साथ र हौसला दुवै दिइन् ।सामाजिक स’ञ्जालमा चलेको अभि’यानका कारण उनीहरुले आ’र्थिक सहयोग पाए ।
भर्खरै मात्र यो जोडीको लागि निकै ठुलो खुशी प्राप्त भए’को छ । यी कोमल जो’डीको केही महिना अघि मात्र सन्ता’न प्राप्ती भएको छ । पहिलो सन्तान:को रुपमा उनेहरु’को छोरा भएको छ । यस खुसीलाई रुपाले? सामाजिक संजाल’मा मा’र्फत सेयर गरेकी थिइन ।
यी टिकटक भिडियोहरुलाई धेरै दर्शनहरुके असाध्यै रुचाएका छन, जसरी रुपाले कृष्णलाई अनि कृष्णले रुपालाई रुचाएका छ । अब प्रस्तुत छ सोही भिडियो … जसलाई एक युटुब च्यानल ले टु’क्रा भिडियो बनाएर अपलोड गरेको छ । – हेरौं उक्त भिडियो
Prevरमेश प्रसाई रिसा,एपछि फकाउँदै उनकी पत्नी नन्दा [हेर्नुहोस् यो रमाइलो टिकटक भि’डियो]
Nextस्टुडियोहरुले रेको’र्ड गर्न किन दिए’नन्? बिष्णु माझी जस्तै दुरुस्तै स्वर भएकी गायि,कालाई (भि’डियो सहित)
“दिदि भाई बिहे गरि भा’गे पछी आमा रु’दै मिडि; यामा, तु’रुन्तै खोजि जे’ल हा’ल्दिनुस साह्रै ला’ज भयो… (हेर्नुस् भिडियो)
गायिका विष्णु माझीलाई अब प्रहरीले खोजी गर्ने,एसपीले नै यसो भन्छन् (भिडियो हेर्नुहोस्)
अन्ततः काठमाण्डौंको होटलबाट प्रेमी सहित यसरी फेला परिन लाहुरेकी श्रीमती (भिडियो सहित) (119252)
६ वर्ष पछि म,रेको मान्छेको चिहा’ न १२ बजे राती खन्नुको कारण बल्ल बुबाले बताʼए -हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) (72488)
“अनिशालाई भेट्न मन छ हो बा,बु” भनेर सोध्दा कन्चनको यस्तो जवाफ हेर्नुस् (भिडियो सहित) (46315)
मोटरसाइकलमा कलंकी जाने भनेर लि’फ्ट मागेकी युवतीले जब चोभार पुर्‍या,इन् र त्यसपछि… (41194)
बलिउडलाई टक्कर दिने नेपालीको भिडियो ‘सिक्किम जाने रेल’ !-हेर्नुहोस (भिडियो सहित) (38486)
मैले दिन नस;केका सबै खु:शि तिमीलाई मिलोस भन्दै छुट्टिए श्रीमान-श्रीमती (भिडियो सहित) (37166)
लाहुरेकी श्रीमतीले रूदै दिईन यस्तो बयान भन्छिन् “मोवाइल गरगहना सबै बेच्यो, मलाई बच्न लागेको रैछ” (भिडियो सहित) (36569)
पिल्स: कस्ता म’हिला हरुले प्रयोग गर्न सक्छ’न् ? कहिले खाने र कसरी गर्भ रहन दिं,दैन ? (34881)
एक रुपै;या खर्च न; गरी बिहे गरेका भा’इरल जोडीलाई, ३५ लाख भन्दा बढीले यस्तो गरे (भि,डियो सहित) (33037)
काठमाण्डौ महानगरपालिकामा ५४ हजार ४ सय ८९ मत गन्दा यस्तो छ उम्मेदवारहरूको प्राप्त मत
गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका जित नारायण थापा मगर